Faucet fandroana volamena vita borosy miaraka amin'ny tatatra pop-up - WOWOW
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana miely be / WOWOW 2 Mitantana Faucet mandro amin'ny fandroana volamena mipetaka amin'ny tatatra pop-up
Ny tombony azo avy amin'ny fantsom-pandroana volamena miparitaka amin'ny fehezanteny fohy:
Faucet Basin ankehitriny sy tsotra: Ny vita vita amin'ny borosy sy volamena dia mety hahatonga ny trano fidianao ho mendri-kaja sy kanto ary hanampy anao hanohitra ny harafesina sy ny harafesina amin'ny fiainanao isan'andro.
Tendrombohitra 3-Hole Miaraka amina endrika 6-14 mivelatra: Ny halaviran'ny fametrahana dia azo ahitsy amin'ny takian'ny basin. Cartridge vita amin'ny seramika misy tombo-kase avo sy fitehirizana rano.
Mora ampiasaina: Tanana roa, 360 degre mihodina famolavolana spout avo, fanaraha-maso mety sy mazava ny habetsaky ny mari-pana sy ny rano. Cartridge ranomainty vita amin'ny kofehy misy tombo-kase avo lenta miaraka amin'ny fampisehoana anti-drip. Ary misy aeratorie NEOPERL mamonjy rano.
Easyny hametraka: Mora apetraka ny rafitra mampifandray haingana, ary azonao atao ny mametraka ny fantsom-pandroana fanasana amin'ny tenanao irery fa tsy misy fantson-drano. Tehirizo ny saram-pametrahana plumbing! Ny fonosana dia miaraka amina tsipika fampitana rano pop up sy cUPC.
WOWOW Faucet fandroana volamena vao nohavaozina
Mifanaraka amin'ny sakany sy ny elanelana
Mety amin'ny koveta fandroana 6 - 16 inch.
Vita amin'ny Brass premium ary asongadina amin'ny endrika maoderina.
Ny famolavolana roa-mora dia mora mifehy ny habetsaky ny rano sy ny mari-pana
Tanana mahitsy amin'ny famolavolana ergonomika, habe mety mety amin'ny fanaraha-maso, ahazoana aina mihodina.
Tendrombohitra ambany vita amin'ny volon-koditra ambany misy endriny avo lenta. Safidy mety indrindra hanavaozana ny fandroana ny fandroanao.
Mifanaraka amin'ny trano hofan-trano, condo vaovao, efitrano tokana, trano misy motera, tranofiara fitetezam-paritra, koveta RV ary fampiasana fianakaviana
Cartridge varahina manokana
Fananganana varahina mafy
Inciara 8 miparitaka
Tendrombohitra 3 Hole Deck
Ny aeratorie Neoperl avo lenta dia afaka manolotra fikorianana malama, afaka mamonjy rano mihoatra ny 50%.
Tonga miaraka amin'ny tsipika famatsian-drano Tucai
Hosan'ny famatsian-drano Tucai miaraka amina fiantohana an-tapitrisany dolara manerantany.
Tsy misy firaka (miaraka amin'ny atiny firakitra latsaky ny 0.25%), cUPC avy amin'i IMPAO, NSF 61 (Vokatry ny fahasalamana amin'ny rano fisotro).
1 x Spout ambony arc; 2 x Tanana
1 x Y hose mpampitohy haingana
2 x 50 sm cUPC fantson-drano;
1 x Mipoitra tampoka
Ampahany : 2320300G Sokajy: Faucets fandroana miely be, Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana Tags: 2 Fandraisana, faucet amin'ny fandroana fandroana, miely patrana
11.69 X 10.04 X 3.11 santimetatra